विश्वकपः बंगलादेशले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका? – Everest Dainik – News from Nepal
विश्वकपः बंगलादेशले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, जेठ २५ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड विरुद्धको विरुद्धको खेलमा बंगलादेशले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । आज टिममा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्-
विश्वकप इतिहासमा बंगलादेश र इंग्ल्यान्डबीच अहिलेसम्म ३ खेल भएको छ । जसमा इंग्ल्यान्डले एक मात्र खेलमा जित निकालेको छ। उसले ११ अप्रिल २००७ मा ब्रिजटाउन मैदानमा जित निकालेको थियो। जहाँ उसले बंगलादेशलाई ४ विकेटले हराएको थियो । बंगलादेशले २०११ को विश्वकपमा इंग्ल्यान्डलाई २ विकेटले र २०१५ मा १५ रनले इंग्ल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो ।
इंग्ल्यान्डमा ९ वर्षदेखि जीतविहीन इंग्ल्यान्ड र बंगलादेशबिच अहिलेसम्म २० एकदिवसीय खेल भएका छन्। जसमा १६ पटक इंग्ल्याण्डलेले जीत हात पार्दा ४ मा बंगलादेश विजयी भएको छ। बंगलादेशले इंग्ल्यान्डविरुद्ध पछिल्लो जितका रुपमा ९ अक्टोबर २०१६ मा ढाकामा निकालेको थियो।